SALLAAR CAANAHA LEH: FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELADA WAXA KA CAAWIYA, SIDA FIICAN, SIDA LOO KARIYO IYO CABO - GARLIC
Ugu Weyn Ee Garlic
Cunnooyinka Caanaha leh Wormiisa Sarqadka, Cadaadiska iyo qufaca
Qaybaha organoleptic ee isku dar ah caano leh toon, dabcan, ka tago wax badan oo loo baahan yahay, iyo waa adag tahay in la qiyaaso isticmaalka ku filan ee noocan oo kale ah wax kasta oo ka mid ah warshadaha wax kariska. Si kastaba ha noqotee, saameynta faa'iido leh ee isku-dhafan ee walxahan oo ku saabsan jirka, ka dhig mid waliba xiiso u leh cilmi baarista oo faa'iido u leh arjiyada kala duwan ee daawada.
Waa maxay isticmaalka "walxaha qarxa"
Hababka faa'iido leh ee toonta ayaa si wacan looga yaqaanaa wakhtiyadii hore, si kastaba ha ahaatee, sidoo kale astaamaha wanaagsan ee caanaha, si kastaba ha noqotee, waxay isku dhexyaacaan midka kale, qaybahani waxay kobciyaan qaar ka mid ah saameyntaan, qaarkoodna way baaba'ayaan. Halkan waa liis qiyaas ah. sifooyinka wanaagsan ee isku dar ah toon iyo caano:
Sababtoo ah walxaha bayolojiga firfircoon ee ka samaysan toonta, iyo bakteeriyada caanaha, difaaca jirka ayaa la xoojiyaa oo hawlaha ilaalinta jidhku waa la dhaqaajiyaa;
badeecadani waxay saameyn togan ku leedahay dheefshiidka, tirtiridda caloosha, isha, iwm, iyo sidoo kale hagaajinta nuugista nafaqooyinka;
Waxaa jira saameyn togan ee isku dhafan ee ku saabsan shaqada habka wadnaha iyo xididdada. First of all, waxaa la xiriira la tirtiro kolesteroolka xad-dhaaf ah ee dhiigga iyo xoojinta dhismaha derbiyada vascular;
isku-darka alaabtaasi waxay ka caawisaa in la yareeyo xannuunka xanuunka iyo xannuunada la socda;
toonta caanuhu waxay saameyn wanaagsan ku yeeshaan habdhiska dareemayaasha, yareynaya welwelka iyo baabi'inta hurudda;
haddii aad si fiican u karisid toonta caanaha, waxaad heli kartaa habab lagaga hortagi karo xadgudubka haweenka iyo haweenka taranka;
Qalabkani wuxuu si wanaagsan u caawiyaa dib u soo celinta dheelitirka dabiiciga ah ee bakteeriyada ee mindhicirka iyo in laga guulaysto fara-gelinta diidmada.
Baro wax badan oo ku saabsan toonta: halabuurka iyo waxyaabo faa'iido leh, waxyeelo, guryaha iyo cunto karinta ee la dubay iyo toon qallajiyey, goosashada jiilaalka; iyo sidoo kale qaababka wax lagu sameeyo iyo noocyada caanaha lo'da.
Sida loo kariyo toonta caanaha: raashinka
Inkasta oo ay fududahay in la diyaariyo wax alaab ah oo ay ku jiraan caanaha iyo toonta, badankood waxay u baahan yihiin hab gaar ah.
Qodobka daawada dhaqameedku wuxuu soo bandhigay codsiyo ballaaran oo lagaga hortagayo cudurrada fayras ee kala duwan, mid ka mid ah astaamaha uu qufaco. Waxyaabaha soo go'ay ayaa lagu talinayaa in la cabo 2 jeer maalintii, illaa dhammaadka dhamaystirka qufaca.
Waa muhiim! Xasuuso in daaweynta dadku aanay ahayn bedelaad buuxda oo loogu talagalay daaweynta daroogada, sidaas darteed, ka hor intaadan isticmaalin, waa inaad la tashataa dhakhtarkaaga.
Qodobbadani waa sida soo socota:
Ku shub nus litir oo caano ah digsi kadibna isku kari.
Ka dibna caanaha laga saaro gaaska iyo qabow si heerkulku u raaxeysto oo cuncun.
Ku dar 2 xabbo oo toon ah oo caano ah, waa in marka hore la mariyo saxaafada.
Ku dar isku dar ah 1 qaado oo ah malab iyo 1 qaado oo subag.
Wax kasta oo si fiican u qallaji.
Taas macnaheedu wuxuu noqonayaa mid ku filan laba qaadasho.
Marka qufaca, caanaha leh propolis ayaa sidoo kale loo isticmaalaa.
Guryaha helminthicic ee tufaaxa ee ku qoran buuggan waxay ku soo noqdaan symbiosis leh caan u ah caanaha iyo si dhakhso ah oo si fudud u safraa marinka mindhicirka. Tani waxay u oggolaaneysaa khudradda qaabka isbedelka aan badnayn in la gaaro arjiga loo baahan yahay iyo in la soo saaro saameynta ugu weyn. Waxaan keennaa labada cunto ee ugu fiican:
Qaado 5 xabo oo toon ah oo dhexdhexaad ah, iyaga xoqin oo googooyo yar yar ku jar ama ku shaqee blender.
Marka xigta, ku shub digsi 250-300 ml oo caano ah oo dhoobada oo dhan ku rid.
Isku daadi isku walaaq karkari dabka kadibna ka bax dabka kadib karkarinta 10-12 daqiiqadood oo kale.
Ka dib markaa, ka saar digsiga kuleylka, dabool daboolka oo ha u istaagaan dhowr saacadood.
Diyaargarowgu wuxuu macnaheedu yahay in la cabo 1/3 muraayadaha 3 jeer maalintii cuntada ama midabka dhan ee dhalada ka hor intaadan sariirta aadin.
Waxaa jira aaminsan caan ah in abuurka bocorka iyo gorma wuxuu sidoo kale leeyahay guryaha antiparasitic.
Iyadoo lagu saleynayo qaacidada labaad, waxaa la diyaariyay enema, taas oo leh saameyn aad u badan, laakiin adeegsigeeda badanaa waa mid aad u adag oo ku adag dhibaatooyinka iyo raaxo la'aanta qofka la daweynayo. Waa kuwan soo socda:
Waxaad u baahan tahay inaad qaado 2-3 xabo oo toon ah, si fiican isaga diiriso oo jarjar googo ama burburin saxaafada.
Ka dibna toonta waxaa lagu shubay hal galaas oo caano ah, heerkulku waa inuu ahaado + 10 ... + 12 ° C.
Isku darka waa in la dhigaa dhowr saacadood.
Alaabta la dhamaystiray waxaa lagu shubaa syringe waxaana lagu duraa malawadka ilaa dhowr daqiiqadood. Nidaamka waxaa lagu celiyaa toddobaadka dhexdiisa si loo xoojiyo saameynta.
Waa muhiim! Si loo yareeyo dareenka gubashada xanuunka leh ee lagu hirgelinayo lacagaha aagga dabiiciga ah, waxaad ku dari kartaa dhowr dhibcood oo qashin ah, dhoobo ama saliidi ah saliid muhiim ah.
Waxaa lagama maarmaan ah in la isla markiiba sheego in miisaaniyadan ka timaad qaybahan, loogu talagalay in lagula dagaallamo cadaadiska dhiig karka, ha u lahayn saameyn degdeg ah. Haddii aad go'aansato in laguula dhaqmo iyaga - u diyaari daweynta muddada-dheer iyo dulqaad. Marka ugu horeysa, daawooyinkan ayaa kaa niyadjabi kara, laakiin wakhti ka dambeeya iyo si tartiib tartiib ah ufilmaamid fiican ayaad noqon doontaa oo aad uga yaaban tahay waxtarka dhaqaalahaan. Halkan waa mid ka mid ah cuntada ugu caansanqaadashada daawada dhiig-karka ah:
Ku shub hal galaas oo caano ah gali digsiyada iyo laba madax oo toon ah.
Dharka ku rid dabka oo karkari ilaa ay taabato taabashada.
Kala wareeji iyada oo loo marayo faashadda si ay u xaddiddo.
Cab cabitaankii la dhammeeyey 3 jeer maalintii kadib cuntada iyo 1 qaado oo 2-3 wiig ah.
Sida gargaarka dhiig karka, waxaad isticmaali kartaa saxafrage, foxglove, marigold, periwinkle, malayga, physalis, viburnum, cardamom.
Sababtoo ah alkaloids ka kooban khudradda, iyo guryaha ku jira caano diiran, isku-darka alaabtan waxaa loo isticmaali karaa daaweynta xaalado kala duwan oo neurotic ah iyo hurdo la'aan. Qodobka kor ku xusan, malabku sidoo kale wuxuu ka ciyaaraa kaalin muhiim ah, taas oo gacan ka geysaneysa maskaxda dhadhanka aan fiicneyn ee badeecadda, oo weliba lagu nadiifiyo nidaamka dareemayaasha ee aadka u faraxsan oo u diyaari hurdada.
Qaado 2-3 xabo oo toon ah, iyaga diirran oo si fiican u jilciya, doorbidayaa qasacad.
Ku dar diiran (35 ... 40 ° S) caanaha.
Waxaa sidoo kale ku darsaday miisaan yar oo ah berrin ama malab.
Si fiican u walaaq oo cabb cab 20-30 daqiiqo ka hor wakhtiga jiifka.
Ma taqaanaa? Wadanka uu toon ku jiraa sharafta ugu sarreeya waa Hindiya - waxaa jira qiyaastii qayb ka mid ah saxan kasta. Iyo in Japan, toonta ugu yar ee la jecel yahay oo waxay door bidaan in ay u adeegsadaan oo kaliya sida hab daawo dhaqameed.
Labada qaybood oo ka mid ah daaweynta lagu siiyey maqaalku waxay ugu horrayn halis u yihiin xasaasiyad. Waxaa intaa dheer, waa in maskaxda lagu hayo in haddii, marka laga jawaabayo soo bandhigida mid ka mid ah alaabtan, waxaa dhici karta in falgal xasaasiyadeed uusan dhici karin, isticmaalka wadajirka ah ayaa laga yaabaa in ay u badantahay. Waxaa sidoo kale jira suurtagalnimada dhibaatooyin kala duwan oo leh habka dheef-shiidka, gaar ahaan haddii ay dhacdo in ay waxyeelo ka soo gaarto alaabta caanaha jidhkaaga. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah shubanka iyo xajmiga ugu badan. Si kastaba ha ahaatee, inta badan dhacdooyinka saameynadaas ayaa laga hortegi karaa iyada oo caadada u ah microflora mindhicirka.
Ma taqaanaa? Mid ka mid ah magaalooyinka ku yaala Maraykanka waxaa lagu magacaabaa ka dib, khudradda maqaalkeena. Magaciisu waa Chicago, kaas oo ka tarjumaya Hindiya sida "toon duur".
Laguma talin in aad isticmaasho isku-dar ah waxyaabaha soo socda haddii aad qabtid cudurada mareenka caloosha iyo mindhicirka ee marxaladda ba'an (gasensitis, colitis, boogaha, xajmiga pancreatitis, iwm), haddii aad qabto dhibaatooyin la xiriira shaqada habka biliary ah, cudurka macaanka, miisaanka iyo naas nuujinta.
Isticmaalka caanaha leh toonta: dib u eegista user
Waxaan lahaa duufaanka ugu xoogan ee duufaanka, xanuunka ayaa ahaa mid cabsi badan - ilaa miyirka lumiyo. Laakiin waxay go'aansatay inayan ku sumoobin kiimikada, laakiin in ay nafteeda ka caawiso daaweynta dadweynaha. Sidaa darteed, waxaan akhriyey gede, inaan cabbo caano leh toonta la jajabiyey - waan sakhraamay, sidaas darteed waxaan sidoo kale beeray boorsooyinka. Ugu dambeyntii - waxaan ku soo galay cusbitaalka. Talo-bixinteyda adiga ayaa ah in haddii ay dhacdo cudurro halis ah, marnaba is-daweeyn, isla markiiba la xiriir khubarada!
Buuanku marnaba kuma dhici doono 15 mitir mindhicirrada, xitaa mindhicirrada yaryar ... si fiican, intee in le'eg ayaa loo baahan yahay in caanaha lagu shubo oo dhan ay tagaan? Laakiin waxa ku saabsan waxyeellada enema, miyuu ku dhaqaa dhammaan microflora xiidmaha nool, iyo toonta caadiga ah ee caadiga ah ee xuubka xuubka ah? ma gubi doonaan? Waxaad isku daydaa inaad xoqdo dhoobo wakhti dheer ah xuubka xabka, waxaa jiri doona dab! wax walba waxay u baahan yihiin in si dabiici ah loo sameeyo! Waxaa laga yaabaa inay dhab ahaantii caawiso, laakiin kaliya sababta oo ah in ay si fudud u dhaqeen oo keliya kuwa aan ka fogeyn oo farsamo ahaanba, sidaas oo ah enema caadi ah oo leh weedka qaar ayaa caawin kara ...
Shalayto, ilmuhu wuxuu cabbay nus koob iyo qufuc oo maanta ka fiican. Waan sii wadi doonaa in lagu daweeyo.
dhammaanba noloshayda qaangaarka ah waxay arkeen walxahan, halka hooyaday ku noolayd, mid kale + subag ku daray. Anigu ma aqaan farqiga, mana fahmin. Oo sidaas, haa. Waa in loola dhaqmo daawooyinka uu dhakhtarku qoray oo aan sugin mucjiso laga soo qaato hababka daroogada ee internetka
Sidaas daraadeed, waxaan rajeyneynaa, qodobkan ayaa kuu sharaxay dhammaan waxyaalahaa isticmaalka daroogada sida ciirta iyo caanaha. Xasuuso in daaweynta dadku aysan ahayn argagax, oo ha ka waaban inaad caawimaad caafimaad raadsato haddii baahidaas oo kale ay soo baxdo. Duco!
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Garlic 2019